Xisbiyo Maxkamadda Sare u gudbiyay dacwad ay kaga soo hor-jeedaan nooca doorashada Baarlamaanka uu ansixiyay – Kalfadhi
Labo xisbi-siyaasadeed iyo qaar kamid ah ururada Bulshada rayidka, ayaa Maxkamadda Sare ee dalka geeyay dacwad ay kaga soo hor-jeedaan nooca doorasho ee dhawaan ay ansixiyeen labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Dhammaadka bishii December ee sannadkii 2019, ayaa Baarlamaanka uu ansixiyay nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta in ay tahay (Nooc kamid ah doorashooyinka ka dhaca Yurub, oo ah horreeye ayaa guuleysta, oo la dhex-gelliyay nidaamka qabaa’ilka ee 4.5).
Tifaftirayaasha Kalfadhi, ayaa oggaaday in labada xisbi iyo qaar kamid ah ururada dacwada geeyay Maxkamadda Sare, ay diidanyihiin nooca doorasho ee Baarlamaanka uu ansixiyay, iyagoonna doonaya in xisbiyo ay u tartamaan doorashada.
Dhinaca kale, waxaa ay aaminsanyihiin in dalka Soomaaliya ay ka dhici karto doorasho mar haddii Guddiga Doorashooyinka ay diyaar yihiin, isla markaana waxaa ay qabaan in Gobolka Banaadir iyo shanta maamul-gobolleed lagu qaban karo doorashada ah nidaamka isku-dheellitiran.
Waxaa ay sidoo kale aaminsanyihiin in magaalo kasta mid saddex goobood loo asteeyo doorashada, haddana magaalo kasta oo shantaasi kamid ah min shan goobood loo asteeyo doorashada, sidaasi dhowr malyan oo Soomaali ah ayaa codeyn karta.
Fowsiya Yusuf Xaaji Aadan, oo ah guddoomiyaha mid kamid ah xisbiyada dacwada geeyay Maxkamadda Sare, ayaa sheegtay in ay doonayaan in dalka Soomaaliya ka dhacdo doorasho xur iyo xalaal ah, oo dadka dulman ay iska dhex arkaan.
Marwo Fowsiya, ayaa carabka ku adkeysay: maxaa xisbiyada loo sameeyay haddii qabiil iyo nidaamka 4.5 lagu shaqeynayo?
Qodobka 84-aad ee Dastuurka KMG ee dalka Soomaaliya ayaa dhigaya in laga hor imaan karo haddii sharci uu ansixiyay Baarlamaanka uu jabinayo Dastuurka islamarkaana uu xuquuqda ka hor imaanayo.
Sannadihii 2012, 2016 ayaa la filayay in dalka ay ka dhacdo doorasho Qof iyo Cod ah, balse markii ay suura-gelli weyday ayaa mar kale lagu ballamay sannadkan 2020 haddana waxaa muuqata in dalka Soomaaliya aysan ka dhici karin doorasho Qof iyo Cod ah.